Ungakuthola kanjani ukuzethemba kwekati? | Amakati kaNoti
Ubudlelwano ikati elinabo nomuntu bucishe bufane nobobunye nelinye ilungu lohlobo lwalo. Kusho ukuthini lokhu? U-feline uzoziphatha ngendlela abona ifanele ngokuya ngempatho ayitholayo. Ngokungafani nenja, uma kukhona okwenziwayo okungamjabulisi neze, kuzofanele senze umzamo - okungenani noma omncane, lokho futhi kuzoncika koboya uqobo - ukubuyisa ukuzethemba kwakhe.
Ngalesi sizathu, usuku nosuku, ukubala kusukela ekuqaleni, kufanele senze konke okusemandleni ukuze sihlale ngokujabula nathi. Ngemuva kwakho konke, yithina esinqume ukuhlala naye. Noma kunjalo, izinkinga zingahlala zivela, ngakho-ke uma udinga ukwazi ukuthi ungakuthola kanjani ukwethenjwa ikati, ungayeki ukufunda.
1 Kungani singalahlekelwa ukwethenjwa yikati?
2 Ungakuthola kanjani ukuzethemba kwekati?
2.1 Ingabe ikati lakho lijabule noma cha?
2.2 Yinike isikhala
2.3 Yiba mnene
2.4 Dlala naye
2.5 Leyo mizila ayishodi
2.6 Isikhathi sokudla
Kungani singalahlekelwa ukwethenjwa yikati?
Okokuqala, kubalulekile ukuthi sazi ukuthi kungani lokho kuthenjwa kulahlekile, ngoba uma kungenjalo kuzoba nzima kakhulu kithi ukwazi ukuthi yini okufanele siyenze ukuze siphinde sikuthole. Izizathu ezivame kakhulu yilezi ezilandelayo:
Ikati liye lazizwa linganakwa: isimo esijwayelekile kakhulu ukuthi ikati lichitha usuku lonke lodwa ekhaya, futhi lapho umndeni wakhe wobuntu ubuya abanakile yena yize emthanda kakhulu.
Uphathwe kabi: ukuhlukunyezwa akukhona okwenyama kuphela, kubuye kube ngamazwi. Kuyiqiniso ukuthi ikati aliqondi incazelo yamagama ethu, kepha lazi okuningi ngamathoni nevolumu yezwi. Uma abantu bakho bememeza futhi / noma bakushaya, uma bedlala umculo onomsindo, uma bekuhlukumeza,… ​​isilwane siyohlala ngokwesaba futhi-ke, sizofunda ukungabethembi abantu.
Futhi, ekugcineni, uma senza noma yini engamcasula njengokumphoqa ukuba abe sendaweni lapho kusobala khona ukuthi akayithandi, isibonelo, noma uma singakhombisi uthando noma ukudlala naye.
Okokuqala, kufanele sazi ukuthi ikati yisidalwa esiphilayo esizodinga ukunakekelwa kukho konke ukuphila kwaso. Ngokuthi "ukunakekelwa" angisho nje amanzi nokudla, kodwa futhi nendawo ephephile nenethezekile lapho ungahlala khona. Ngaphezu kwalokho, kufanele simkhombise, nsuku zonke, ukuthi sikhathalela kangakanani ngemidlalo, ukuphululwa, kanye nangezikhathi ezithile (ukudla okumanzi) kwamakati ngezikhathi ezithile.
Uma samukele ikati eliye lahlukunyezwa, noma uma nganoma yisiphi isizathu muva nje singazange silinake, kufanele simbekezelele kakhulu y qaphela umzimba wakho ukuze uqonde ukuthi uzama ukusitshelani. Kufanele uhambe kancane. Akufanele neze siphoqe isimo.
Lapho sizomthambisa, sizomvumela azwe iphunga lesandla sethu kuqala bese kuthi, uma engazange akhamise noma ethukile, sizomthinta kancane futhi kancane kancane emhlane wakhe. Futhi uma ungafuni ukuthola ukutotosa, akukho okwenzekayo, kuzoba nesikhathi sako. Sizokumema ukuthi udlale nsuku zonke futhi kancane kancane uzoqonda ukuthi ngeke sikulimaze.
Ingabe ikati lakho lijabule noma cha?
Kubalulekile ukuthi noma ngabe sikunikeze izeluleko ngaphezulu, uyazi ukuthi ungabona kanjani ukuthi ikati lakho lijabule ngawe noma cha. Uma uma ekubona, abafundi bakhe bevulekile, izindlebe zakhe zithambile, nomzimba wakhe uqobekile, kungenzeka ukuthi akakhululekile. ngobukhona bakho futhi uzofuna ukubaleka.
Uma esaba, uyocasha ekhoneni lendlu. Uma ungakaze ukwenze phambilini, kungenxa yokuthi kukhona okwenzekile okudale ukwesaba futhi wesaba ... kungenzeka ukuthi ulahlekelwe ukuzethemba.
Kubalulekile ukuthi uthole ukuthi ikati lakho belingathandani nokuthi ulawula ongakuthandi. Yize uma ungaqiniseki ukuthi yini engenzeka kuye, ungalandela amathiphu alandelayo ukuzama ukuthola ukuzethemba kwakhe futhi.
Nikeza ikati lakho ithuba lokuzizwa uphephile futhi likhuthazekile ukuthi uzwe uthando lwakho futhi. I-feline yakho izofika kuwe lapho izwa ukuthi ikulungele, kepha akumele uyiphoqe ukuthi yenze kanjalo uma isasolisa. Hlonipha isikhathi lapho singalunga. Kufanele ubekezele ngakho.
Ungalokothi umbambe ezandleni zakho uma ubona ukuthi akafuni, ngoba ungathola ukushaywa okuhle. Uma umbamba futhi uyaxobuka, myeke futhi kuyekele kuhambe ngendlela yaso. Kuwuphawu lokuthi udinga isikhala sakho.
Uma engafuni ukuthi umlande, ake akutshele ukuthi ufuna ukucindezelwa nini futhi ukwenze ngothando lwakho lonke uma ekuvumela ukuthi ukwenze.
Lapho ekuvumela ukuthi umphulule, kuyindlela yokutshela ukuthi uyakuthemba futhi, noma engakuvumeli ukuthi umlande. Ukukulandela ngokuzenzekelayo noma ukugcoba imilenze yakho nakho kuyisibonakaliso esihle.
Ungazama ukumdlalisa elele ekhanda noma phakathi kwezindlebe zakhe ngisho nasesilevini ukuze ubone ukuthi uyakwamukela yini. Kepha uma ikati lakho lingafuni ukukugwema. Ungazama futhi ukuxubha ngokunyakaza okuhamba kancane nokuhamba kancane. Lokhu kuzomenza azizwe kamnandi eduze kwakho.
Lapho ubona ukuthi iqala ukusondela kuwe, kungaba umqondo omuhle ukuqala ukuzama dlala ngaye. Ungakwenza lokhu ukuze wakhe kabusha ukwethembana futhi wenze ikati lakho libe nomuzwa wokuthi umthanda ngempela., uyamhlonipha nokuthi uthanda ukuchitha isikhathi naye.
Ungasebenzisa ithoyizi lekati noma into athanda ukudlala ngayo njengentambo noma umqulu wamakhadibhodi ... noma yini ayithokozelayo nawe yamukelekile. Khumbula ukuthi isikhathi sokudlala nokuthi kufanele umnake ngokugcwele ukuze azizwe ethandwa ngempela.
Leyo mizila ayishodi
Imizila ibalulekile kubantu, kepha nasemakati. Bayathanda ukwazi ukuthi kuzokwenzekani ngokulandelayo. Ngakho-ke, funa okwejwayelekile ezindaweni ezahlukahlukene zendlu yakho ukuze ukudlulise eceleni kwakho.
Ungahlanganisa ukudlala nokuphumula. Amashejuli nekati lakho abalulekile ngakho-ke gcina engqondweni osukwini lwakho nosuku.
Ukunikeza ikati lakho ukuphatha ngezikhathi ezithile (ukuphatha okuhle kwekati) kungumbono omuhle wokugcina ukuthembela kwakho kuwe. Ungabavuza ngokuziphatha kwabo okuhle.
Futhi, zondle ngokwakho futhi ngaleyo ndlela uzokwakha isibopho esiseduze kakhulu nekati lakho, ngoba bahlala bekhetha labo bantu abakhathalelayo ngokudla kwabo. Mnike imiklomelo esesandleni sakho ukuze azi ukuthi nguwe omthandayo.
Ukusebenzisana kufanele ngaso sonke isikhathi kube kuhle ngoba uma ikati lakho liba nokwesaba futhi ngenxa yokusolwa, ukuthembana kungahle kuphuke futhi nokuthi ukubuyisa isibopho kuzoba nzima kakhulu.
Uma engafuni noma efihla, ungamjahi noma umphoqe ukuba adle esandleni sakho. Yiba nesineke futhi umvumele akwenze lapho ezizwa ekulungele.
Uma, ngaphandle kwemizamo yethu, izinyanga zidlula futhi singatholi ncono, kunconywa kakhulu ukuthi uthinte i-ethologist noma i-feline Therapist.
Indlela ephelele ye-athikili: Amakati kaNoti » Amakati » Curiosities » Ungakuthola kanjani ukuzethemba kwekati?